🥇 ▷ Halxiraalaha Sega Da'da & Tallaabada: Ichidant-R ayaa dhowaan ku soo dhici doonta Japan Switch eShop ✅
Halxiraalaha Sega Da’da & Tallaabada: Ichidant-R ayaa dhowaan ku soo dhici doonta Japan Switch eShop
Sega ayaa shaaca ka qaaday Khayaali iyo fal: Ichidant-R “dhakhso u imanaya” oo loo dirayaa Japan Switch eShop Sii daynta soo socota ee Sega Ages waxay ka bilaabatay qolka ciyaarta 1994-kii waxaana ugu dambeyntii laga heli karay Game Gear iyo Mega Drive (Genesis).
In ka badan Switch Nooca eShop-ka waxaa ka muuqan doona qaabka loo yaqaan ‘arcade mode’, Mega Drive mode (oo ka kooban raadinta, tartan, iyo qaabab bilaash ah) oo ay weheliso cayaaraha shabakadda, u oggolaanaya ciyaartoydu inay si wadajir ah ugu ciyaaraan khadka tooska ah. Waa tan halkaan hoose ee qaabka loo yaqaan ‘Arcade mode’, oo uu iska leeyahay Gematsu:
Labadan lama filaan ah ayaa soo noqday, markan oo kaliya sidii labo mindiyood oo adduunka dhex dhexaadin ah. Ciyaartoygu waa inay dhammaystiraan afar marxaladood iyo 10 wareeg oo dagaallo yaryar ah si ay u badbaadiyaan amiiradkii uu afduubay Demon King. Sawirro cad ayaa kaliya laga heli karaa nooca arcade ee lagu ciyaaray noocaan. Haddii aad isticmaasho caawiye, waxaad ku bilaabi doontaa ciyaarta si taxaddar leh 20 oo waxaa jira kaliya hal ujuuro ciyaar yar-yar, si aad u dheeleyso si dhaqso ah oo aad u deganaan badan.
Marka loo eego qaabka Mega Drive, kani waa waxa aad ka filan karto:
Qaabka raadinta – Qaabka aad kor u qaadid intaad uruurineyso dhagaxa falsafadda si aad uga adkaato Demon King. Waxay taageerayaan illaa labo ciyaartoy. Sheekadu waa sida soo socota: Maalin maalmaha ka mid ah, Demon King wuxuu ka dhex muuqday boqortooyo nabdoon. Demon King wuxuu qafaashaa boqoradda, wuxuuna amraa qalcaddii, isaga oo dhisaya meel ku wareegsan. Si aad uga adkaato Dember King, waa inaad aruurisaa dhagxaanta Falsafadeedka adduunka oo dhan si aad u burburiso qalcadda qalcadda. Jilibyadii bilaabay safarkan waxay maqleen sheekadii Demon King ee ka timid tuulooyinka, ka dib waxay bilaabeen safarkooda inay ku ururiyaan Dhagaxa Falsafadda.
Qaabka Tartanka – Ku sii hormarinta meelaha u eg qaabka ‘Sugugoku’ oo ku tartami ciyaarta taayirrada aad degto. Illaa afar ciyaartoy ayaa loo oggol yahay.
Moodeel bilaash ah – Hel dhibco ku saleysan waxqabadkaaga. Ciyaartoyga gaadha tirada dhibcaha ugu horeeya ee guuleysta. Illaa afar ciyaartoy ayaa loo oggol yahay.
Oo halkan waxaa ah qaar ka mid ah shaashad-shaashadda:
Miyaad siidayntaas u malaynaysaa inaad jeclaan lahayd? Waa maxay cayaaraha kale ee Sega aad jeceshahay inaad ku darto khadka da’da? Faallooyinka hoose.